Yesaia 16 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Moab ho atemmusɛm no ntoaso (1-14)
16 Momfa odwennini nkɔma asaase no so hene,Momfa no mfi Sela mfa sare so,Na momfa no nkɔ Sion babea bepɔw no so. 2 Nea ɛbɛto Moab mma mmea wɔ baabi a wɔfa twa Arnon asu+ no,Ɛbɛyɛ sɛ anomaa a wɔapam no afi ne berebuw mu.+ 3 “Momfa akwankyerɛ mma, momfa gyinaesi no nyɛ adwuma. Edu awia ketee a, ma wo nwini nyɛ sɛ anadwo. Wɔn a wɔahwete no, fa wɔn sie; na wɔn a wɔreguan no, nyi wɔn mma. 4 O Moab, ma me nkurɔfo a wɔahwete no ntena wo mu. Ɔsɛefo no+ nti, fa wo ho yɛ hintabea ma wɔn. Nea ɔhyɛ wɔn so no awiei bɛba,Ɔsɛe no to betwa,Na wɔn a wotiatia afoforo so no bɛsɛe afi asaase so. 5 Afei wɔde ahengua bi betim hɔ ɔdɔ* so. Nea ɔbɛtena so wɔ Dawid ntamadan mu no bɛyɛ ɔnokwafo;+Obebu atɛntrenee, na ɔbɛyɛ adetrenee ntɛm.”+ 6 Yɛate Moab ahomaso no, sɛ ɔyɛ dwae papaapa.+Yɛate n’ahantan ne n’ahokyerɛ ne n’abufuw no;+Nanso n’anomdwa bɛyɛ kwa. 7 Enti Moab besu ateɛteɛm wɔ n’amanehunu ho;Wɔn nyinaa bɛbɔ bena.+ Wɔn a wɔn ho yeraw wɔn no bedi abooboo, Kir-Hareset+ bobe keeki nti. 8 Efisɛ Hesbon+ mfuw ahyew,*Sibma+ bobe no,Aman no atumfo atiatia ne nnubaa a asow bobe pa dɔsɔɔ no so;Ɛkɔe ara koduu Yaser;+Ekoduu sare so. Ne mmãã trɛtrɛwee, na ɛkɔe ara koduu po mu. 9 Eyi nti na mesu Sibma bobe sɛnea misu Yaser no. Mede me nisu bɛfɔw wo, Hesbon ne Eleale,+Efisɛ sɛnea wɔteɛteɛm gu w’ahohuru bere mu aba ne wo twabere so no, aba awiei.* 10 Wɔapam anigye ne ahosɛpɛw afi turo mu,Na ahurusi dwom ne nteɛteɛm ayera afi bobe mfuw mu.+ Wɔn a wokyĩ nsã renkyĩ nsã* wɔ amoa a wokyĩ nsã wom mu bio,Efisɛ mama nteɛteɛm no to atwa.+ 11 Eyi nti na me nsono mu wosow wɔ Moab ho+Te sɛ sanku hama a ɛrewosow,Na me yam hyehye me wɔ Kir-Hareset ho no.+ 12 Sɛ Moab brɛ ne ho som wɔ sorɔnsorɔmmea,* na ɔkɔ ne tenabea kronkron kɔbɔ mpae mpo a, ɛrenkosi hwee.+ 13 Eyi ne asɛm a Yehowa dii kan ka faa Moab ho. 14 Na seesei nea Yehowa reka ni: “Akyɛ koraa mfe abiɛsa, te sɛ ɔpaani mfe,* Moab anuonyam bebutuw na aporɔw atetew koraa, na nnipa a wɔbɛka no bɛyɛ kakraa bi, wɔrenyɛ den.”+
^ Anaa “akisa; atwintwam.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Efisɛ ɔko nteɛteɛm no asian aba w’ahohuru bere mu aba ne wo twabere so.”
^ Anaa “wɔbɛkan no pɛpɛɛpɛ te sɛ nea ɔpaani yɛ no”; kyerɛ sɛ, mfe abiɛsa pɛpɛɛpɛ.